အသဲကွဲပြီး အသဲကွဲအပေအတေ သီချင်းထဲကလို မပေတေရဘူးဆိုတဲ့ မိစန္ဒီ - Cele Gabar
အသဲကွဲပြီး အသဲကွဲအပေအတေ သီချင်းထဲကလို မပေတေရဘူးဆိုတဲ့ မိစန္ဒီ
နိုင်ငံကျေ်အဆိုတော် မိစန္ဒီကတော့ မကြာသေးမီကမှ နိုင်ငံကျော်အဆိုတော် Jewel နဲ့တွဲဖက်သီဆိုထားတဲ့ အသဲကွဲအပေအတေ ဆိုတဲ့ သီချင်းရဲ့ Music Video ထွက်ရှိထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီသီချင်းလေးကတော့ အသဲကွဲလို့ စိတ်ဓာတ်ကျပြီး အပေအတေဖြစ်သွားတဲ့အကြောင်းကို မိစန္ဒိကိုယ်တိုင်ရေးသားထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
မိစန္ဒီကတော့ ပရိသတ်တွေကို အဆိုတော် Jewel နဲ့တွဲဖက်သီဆိုထားတဲ့ အသဲကွဲအပေအတေ ဆိုတဲ့ သီချင်းရဲ့ Music Video အားပေးကြရင်း အသဲကွဲပြီး သီချင်းထဲကလို မပေတေရတဲ့အကြောင်းကို “မိစန္ဒီနဲ့ Jewel ရဲ့ အသဲကွဲအပေအတေ music video လေးကြည့်ပြီးပြီလား? ပရိတ်သတ်ကြီးရော အသဲကွဲဖူးလား? အသဲကွဲပြီး သီချင်းထဲကလို မပေတေရဘူးနော်.. မတန်ဘူး “ကိုယ့်အပေါ်မကောင်း ဂျောင်းပေါ့” OK?” လို့သူ့ရဲ့ လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ မိစန္ဒီနဲ့Jewel တို့ တွဲဖက်သီဆိုထားတဲ့ အသဲကွဲအပေအတေ ဆိုတဲ့ သီချင်းရဲ့ Music Videoကတော့ လက်ရှိမှာ ကြည့်ရှူသူ သိန်းချီသွားတဲ့ အထိ ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးမှုကိုရရှိထားပါတယ်
CeleGabar ပရိသတ်ကြီးရေ နိုင်ငံကျော်အဆိုတော်မိစန္ဒီကတော့ သူ့ကိုယ်တိုင်းရေးသားထားပြီး နိုင်ငံကျော်အဆိုတော် Jewel နဲ့တွဲဖက်သီဆိုထားတဲ့ အသဲကွဲအပေအတေ သီချင်းရဲ့ Music Video အားပေးကြရင်း အသဲကွဲပြီး သီချင်းထဲကလို မပေတေရဘူးလို့ ပရိသတ်တွေအကြံပြုစကားဆိုထားပါတယ်နော်။
Source: Mi Sandi
Posted in Cele NewsTagged Cele, Cele Gabar, Cele Myanmar, Celebrities, Celebrities Myanmar, Celebrity, Celebrity Myanmar, Mi Sandi, Myanmar Cele, Myanmar Celebrities, Myanmar Celebrity, ဆယ်လီ, ဆယ်လီကမ္ဘာ, ဆယ်လီမြန်မာ, မြန်မာဆယ်လီ, မိစန္ဒီ
Previous post ရင်သွေးငယ်များခိုလှုံရာ လူငယ်ဖွံံဖြိုကရေး ပရဟိတဂေဟာမှာ ရေစုကန်လှူဒါန်းပေးခဲ့တဲ့ ဖြိုးပြည့်စုံ
Next post အငွေ့အသက်များ သီချင်းလေးနဲ့ TikTok လေးရိုက်ပြီး တင်ပေးဖို့ ပရိသတ်တွေကို တောင်းဆိုလိုက်တဲ့ ချမ်းမြေ့မောင်ချိုနဲ့ Ah Boy